Ny tsy fahalalana ny olombelona dia ny herin'ny fifampifehezana sy ny fomba fitantanana azy, ny fanatanterahana ny fanovana
Tsy mahatsiaro - fifandraisana, fitantanana, miasa miaraka amin'ny tsy mahalala fomba
Ny tsy mahafantatra ny olombelona dia tsy inona fa ny zavatra rehetra hitany mandritra ny androm-piainany. Ireo rehetra izay navotsotra tamin'ny fahalalàna ny toe-javatra mampalahelo, dia mitahiry ao an-tsainao ny eritreritra mahitsy. Mino fa mandritra ny torimasina, ny fanekena dia maneho ny maha-izy azy araka izay tratra ary miaraka aminy no ahafahanao mifandray.
Ny fahatsiarovan-tena sy ny fiheveran'ny olona iray
Ny saina roa eo an-doha - ny fahatsiarovan-tena sy ny fiheveran-tena - dia mifamatotra akaiky ary mifampiankina sy mifamaly samy izy ireo. Ny fahatsiarovan-tena (tanjona tanjona) dia mandefa hafatra mankany amin'ny tsy fahatsiarovan-tena, izay mamaky ny fampahalalana amin'ny marika. Ary raha azo ampitahaina amin'ny kapitenin-tsambo (olona) ilay fahatsiarovan-tena, dia ny ekipa tsy mahatsiaro no ekipa. Ny toe-tsaina tsy fantatra, tahaka ny fahatsiarovan-tena, dia mahafantatra ny zava-drehetra momba ny olona iray. Ny fiheverana, ny loharanom-bola tsy misy fetrany, fa koa ny fiheverana ratsy sy ny toe-tsaina ratsy dia voarakitra ao anatin'ny fiheverana.
Tsisy faniriana - ahoana no hifehezana azy?
Ny fanaraha-maso ny saina tsy mifantoka dia mifototra amin'ny fitaovana tena manan-danja sy mahery vaika, ny anarana dia ny fahatsiarovan-tena, izay midika hoe ny fotoana sy ny fijerena. Izany fomba izany no ahafahanao mifehy ny fifankahazoana. Rehefa manakorontana ny saina dia manara-maso ny olona izany, saingy rehefa mieritreritra ny olona iray voafehin'ny eritreritra: dia nodinihina izy ireo, nosoloina an-tsokosoko ho an'ny olona mandamina azy - nanjary mahazatra ny fifandraisana amin'ny tsy fanekena.
Ahoana ny fomba ahazoana valiny avy amin'ny mpiara-dia?
Ny fifandraisan-davitra amin'ny fiaraha-miombon'antoka dia mety hiorina amin'ny fampiasana teknika tsotra, ny olona iray no mahazo azy voalohany, ny hafa mila fotoana. Fomba tsotra mifandray amin'ny mpiara-dia:
Fiaramanidina fitaratra . Ny olana dia nosoratana tamin'ny taratasy iray izay nanosika ilay olona, ​​avy eo nisy fitaratra iray napetraka ary ny fanontaniana na ny olana dia eritreretina ao an-tsaina, ary ny mofomamy dia mamo. Misy fitaratra napetraka amin'ny taratasy ary ny ampitso dia mamo ny maraina. Mety ho tonga amin'ny nofy io alina io.
Ilay boky . Misafidiana boky iray, mamolavola ny valiny ho an'ny tsy fantatra, manokatra ilay boky ary manisy rantsantanana na aiza na aiza. Vakio ity.
Teny ho an'ny saina tsy misaina
Ny tenimiafina ho an'ny fanekena na ny fehiloha dia fitaovana mahomby, noforonin'i J. Mangan. Ny teny "Magic" dia mivantana mivantana amin'ny fiarahana, manampy amin'ny fanovana ny fanjakana. Fantatra amin'ny rehetra ireto teny ireto:
miova - manafoana ny fanaintainana ao amin'ny vatana;
fisainana - miala amin'ny alahelo mampahory, maniry;
faharetana - ho amin'ny fahombiazana;
Diniho - hahazoana fahaleovan-tena ara-bola;
miaraka - rehefa mila manao zavatra ianao;
close - avereno miaraka amin'ny lolom-po mahery vaika, fahasosorana amin'ny olona hafa;
manangona - mihaino ny ankizy;
mahitsy - mampitombo ny fitiavan-tena;
end - endri-paharetana;
na hamela anao hitoetra ho salama izany, na hampitony ny sainao.
Ahoana ny fomba hiaraha-miasa miaraka amin'ny tsy itandremana?
Ny fomba fiheveran'ny olona iray tsy fantatry ny olona iray dia tsy takatr'izy ireo tsara, ny atidoha dia manana misitery maro. Ny harona evolisiona manontolo amin'ny razambe, manerana ny tantaran'ny olombelona, ​​dia tafiditra ao anatin'ny psyche, noho izany dia tsy voatery mazava hatrany ireo orinasa na rafitra hafa miseho avy amin'ny halalin'ny tsy mitandrina. Hatramin'izao dia mampiasa fomba isan-karazany ny psychologists (samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana azy avokoa ny tsirairay):
Ahoana ny fomba hanesorana ny tahotra amin'ny tsy itandremana?
Ny tahotra dia mety ho lasa mpiombona amin'ny olona iray - fikorontanana izay mandrisika anao hivoatra amin'ny loza, ary tsy misy antony tsy misy antony, ka manontany tena ny olona tsirairay hoe: ahoana no hanesorana ny tebiteby sy ny tahotra amin'ny tsy fanekena? Izany dia dingana iray amin'ny olona tsirairay ary raha lalina ny tahotra, tsara kokoa ny miverina amin'ny manampahaizana manokana, ny fanahiana sy ny tahotra kely dia azo esorina, manaraka ireto fanolorana manaraka ireto:
Miala amin'ny toe-javatra iray izay miteraka tahotra amin'ny fihetsika tsara mandritra ny andro vitsivitsy (noho ny tahotra ny hitondra fiara mpamonjy aina, imbetsaka mba hampiseho azy amin'ny antsipiriany rehetra ary maneho ny tenanao amin'ny fotoana mitovy tony sy mandanjalanja)
mihaona amin'ny tahotra manoloana ny tarehiny (manomboka manao izay nampisy tahotra, ohatra, mba hitsambikina amin'ny lozam-piaramanidina amin'ny tahotra avo indrindra);
Miara-miasa amin'ny saina tsy fantatra - mamolavola ny fanovana
Ny toe-tsaina ratsy eo amin'ny fiheverana dia matetika mandà ny ezaka rehetra ataon'ny olona iray handresena ny olana na ny fikatsahana fahombiazana. Manohitra ny sitrapon'ny tsirairay ny olona iray, izay matetika no misintona ny olan'ny olana, izay tsy misy izy ireo. Saingy ankoatra ny hery manimba ny fifankahafantarana, misy ihany koa ny famoronana iray, ary ao anatin'ny herin'ny olombelona no mahatsapa izany ary manomboka mieritreritra amin'ny fomba maoderina, izay miteraka ny fiheveran'ny olona. Izany dia afaka manampy amin'ny dingana manaraka ny "Fitetezana tsara":
Alaivo ny andraikitr'izy ireo amin'ny hetsika, ny olana, ny fahavetavetana amin'ny tenany. Makà sombin-taratasy ary soraty ny toetranao ratsy sy ny olana rehetra satria izaho (izaho / nofoko io asa tsy misy karama io, mpiara-miasa).
Mangataka famelan-keloka ho an'ny tenanao.
Manolo ny eritreritra ratsy amin'ny mifanohitra amin'ny heviny (tsy mendrika aho → mendrika aho, tsy manana ny tanjaka → feno hery aho) ary averiko indray ho fanamafisana mandritra ny 3 volana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny tsiahy mandritra ny torimaso?
Ny tsy mahatsiaro ny olona iray dia tsy matory na oviana na oviana, eny fa na dia ny fanambaran'ireo manam-pahaizana aza fa mandritra ny nofinofy dia mbola mavitrika kokoa ny fiheverana fa tsy any amin'ny fanjakana mihozohozo. Ny atidoha dia mandrindra ny fampahalalana voaray hatramin'ny andro, mandalina azy io amin'ny traikefa efa nisy teo aloha ary afaka manonofy fanakorontanana raha toa ka mitombo ny traikefa tsy mitombina amin'ny fiheveran-tena amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izany, noho izany dia manandrana mampitandrina ilay olona ny "tsisy saina": "aza mandeha any!", "Tsy afaka ny hiatrika ity olona ity ianao! ". Indraindray, ny fanomezam-pahasoavana dia manome ny nofinofy ara-paminaniana, toy ny zava-nitranga, ho an'ny mpahay siansa - zava-miafina.
Misy fombafomba mahasoa izay ahafahanao manorina amin'ny fomba mahomby ny fanekena tsy an-kiato mandritra ny torimaso:
Ny fanambaràna nomena talohan'ny fotoana natory tao amin'ny toetry ny alpha rhythm dia mampifanitsy ny atidoha ho fanasitranana ny fahasitranana sy ny fampidirana ny toerana niriana ho amin'ny tsy fanekena;
fanaraha-maso - miara-miasa amin'ny saina tsy misaina alohan'ny hatory, ao anatin'ny toe-piainana mangatsiatsiaka mba hampisehoana amin'ny antsipiriany kely ny faniriany araka izay efa vitany.
Boky momba ny tsy mampanahy
Ny herin'ny sain'olon-tokana dia lehibe, psychologists ary ny olona manizingizina ny lalan'ny fahaleovan-tena. Ny fampiasana ireo teknika voalaza ao amin'ny boky dia zava-dehibe ny hiantehitra amin'ny fahatsarana sy ny toe-piainan'ny tsirairay, aorian'ireo fandaharanasam-pandrenesana mahatsiravina sy ireo traikefa ara-tsaina dia mety hampidiran-doza lehibe amin'ny olona iray. Ny teknika sy ny fampiasana sasany dia ilaina ho fampandrosoana. Boky momba ny mety hisian'ny tsy ampoizina:
" Tsiambaratelon'ny fahatsiarovan-tena " V. Sinelnikov. Manome teknika manasitrana ny mpamorona, manamboatra olona iray ho sitrana, mahita fifandraisana mirindra.
" Tsiambaratelo momba ny tsy mahalala " L. Nimbruck. Famotopotorana ny "boaty mainty" an'ny fanekena tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny nofy manintona.
"Ny ati-olombelona mihoatra ny olombelona. Fialantsasatra amin'ny "M. Raduga. Manome fitaovana revolisionera ny boky mba hanakanana ny finoana sy ny fihetsika henjana, nampidirin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina.
" Sokafy saina " A. Sviyash. Ny "lakozia" amin'ny fizotry ny tsy fanekena eo amin'ny fomba fitantanana azo tsapain-tànana, ary maro amin'ireo fitaovana fanoratana ny fampiasana fitaovana ampiasaina amin'ny atidoha.
"Ny zava-mitranga dia afaka manao ny zava-drehetra " J. Kehoe. Ny boky mivarotra indrindra. Ny mpanoratra dia manolotra fomba fanao mahazatra izay mampientanentana ny dingana tsy fahita firy mba hahatratrarana ny zavatra tena ilaina.
Sarimihetsika momba ny tsy fanekena
Ny sarimihetsika momba ny saina sy ny fanekena dia mahaliana ireo psychologists, olona tafiditra amin'ny famoahana ny fahaiza-manaony. Ny atidohan'olombelona dia zava-miafina miafina, iza no mahalala izay hafenina ao? Sangan'asa miavaka amin'ny horonantsarimihetsika, maneho ny fisaloran'ny fizaran-draharaha:
"Areas of Darkness / Without Limits" . Eddie Morra dia reraka eo amin'ny fiainana, rava ny fanambadiany, tsy mpanoratra izy, fa ny zava-drehetra dia manova ny fihaonana amin'ny Vernon rafozana teo aloha, izay manome azy fanafody mahagaga izay mampiseho ny mety ho an'ny atidoha 100%.
"Masoandro masoandro tsy manam-petra" . Ny sarimihetsika momba ny fitiavana, izay tsy matahotra ny "mamela fahatsiarovana", ny tsy mahatsiaro ny endrika lehibe dia mandà ny famafana ny fihetseham-po, ary eo amin'ny toerana iray eo amin'ny halalin'ny fahatsiarovan-tena i Joel sy i Clementine dia mifankatia sy mivantana.
"Deja vu / Déjà Vu" . Ny horonantsary dia mikasika ny tranga miafina amin'ny tsy fantatra, fantatra amin'ny hoe vu vu, izay voalaza amin'ny hafatry ny atidoha hoe "efa nisy izany."
«Island of the Damned / Shutter Island» . Mpiasa federaly Teddy Daniels sy Chuck dia mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana ara-pahasalamana ao Shatter Island mba hanadihady ny fanjavonan'ny ankizy mpamono Rachel Solando. Ny bala amin'ny fanadihadiana dia mihaingo sy sarotra amin'ny zava-misy fa ny tsiambaratelon'i Daniels dia mitazona ny tsiambaratelony manokana.
"Manomboka / maneso" . Dominic Cobb dia manam-pahaizana sarobidy amin'ny fanesorana ny tsy faneken'ny vahoaka, mangalatra fampahalalana sarobidy amin'ny alalan'ny nofy manintona.
Algurisme - ny fiantraikany sy ny fiheverany
Fiahiana tsy tapaka
Ny endriky ny lokon'ny maso
Ny dikan'ny loko amin'ny psikology
Ahoana no hahatonga azy ho lasa firaisana?
Ny efitry ny menarana
Sakafo - Fashion Autumn 2016
Dimexide sy Solcoseryl avy amin'ny karavasy
Bruxism - Antony
Mampikorontana amin'ny dikyxide ho an'ny ankizy manala baraka
Votoatin'ny kalôria moka
Mpandainga telo taona no aretin'ny raiamandreny
Fandotoan-drà mialoha ra
Sakafo misy zioga sy atody
Miomana amin'ny voatabia ho an'ny ririnina
Ny fitsipiky ny fahamarinana
Mofomamy chic na feno: Diane Kruger dia diso fanantenana tamin'ny akanjo tsy nahomby
Cyclamen persiana - fikarakarana tokantrano